5 Fishing Best Places In Eoropa To Ankafizo | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Fishing Best Places In Eoropa To Ankafizo
Fotoana famakiana: 5 minitra(Last Nohavaozina: 16/01/2021)
Tsy misy na inona na inona tena toy nanjono voalohany ao amin'ny toerana vaovao. Fa misy angler, na naniry na feno traikefa, jono dia asa sarobidy izay manampy azy ireo miala voly. Inona no mety ho tsara kokoa ho azy ireo noho ny fizahan-tany sy ny fanakambanana toerana tena tianay?
Soa ihany ho an'ireo izay tia jono, misy toerana lehibe any Eoropa izay endri-javatra isan-karazany trondro. Raha toa ianao mikasa ny hanao ny vakansy manaraka izay rehetra mikasika ny fanjonoana, dia afaka manampy anao hanapa-kevitra izay haleha. Ndeha isika hijery ny lisitry ny 5 Places mpanjono tsara indrindra any Eoropa mankafy:
1. Fishing Places tany Soeda
Raha te-trondro Soeda, tsy voatery mijery be kokoa noho ny Stockholm Fa lehibe toerana fanjonoana. Ohatra, Stromgatan mahitsy eo afovoan-tanàna, Ary manana fijery lehibe. Afaka hijery ny amin'ny trano sy ny parlemanta soedoa The Old Town raha jono. Tanàn-dehibe iray hafa toerana dia ny Hammarby Sjostad eo Hammarby farihy, malaza manodidina any Stockholm. Izany no be dia be ny toerana sy jono be dia mora mora ao an-tanàna.
Na izany aza, raha te mahazatra kokoa ny natiora fanjonoana traikefa, dia tsy maintsy mitondra fiara lavitra avy any Stockholm. Ringsjon Lake manome toerana fanjonoana tsara tarehy ny sasany izay afaka hahazo whitefish sy ny avana trondro. Drevviken mangina iray hafa farihy akaiky Stockholm, mitovitovy amin'ny Ringsjön. Mahatalanjona ary maharitra toerana hanjonoana, Drevviken Lake tsy handiso fanantenana anao.
Azonao atao koa ny loha tsy mahazo manao amin'ny Stockholm vondronosy sy ny nosy Galo, izay tena mitokana paradisa. Azonao atao ny toby ka trondro any ao am-ponao ny votoatin'ny, nankafy ny vondronosy ny toetra.
2. Fishing Places any Frantsa
Frantsa no firenena tsara tarehy Fa fotsiny ny asa rehetra, noho izany dia tsy mahagaga jono any Frantsa ihany koa ny lehibe. Ny iray amin'ireo malaza indrindra jono toerana dia Lac de Bourget, Frantsa lalina indrindra sy lehibe indrindra farihy. Tena mahavariana ity tranon'ny toerana satria ny 30 karazan-trondro. Anisan-dry zareo, atendro, zander, Pike, ary ny akoho, miavaka. Ny farihy tokoa ny kavim-Rhône-Alpes amin'ny faritra.
Avy eo misy ny Bassin d'Arcachon eo atsimo-andrefana morontsiraka Frantsa - ho an'ireo izay tia dranomasina fanjonoana. Beautiful masoandro miposaka, rano madio mangarahara, ary ny ranomasina dia zavatra vitsivitsy azonao antenaina ao amin'ny Arcachon.
Anglers avy any ivelany ny fitiavana Lake Der-Chantecoq, mahitsy eo am-pon'ny amin'ny faritra Champagne, somary akaiky Paris. Tena tsara izany toerana ho an'ireo vao manomboka, na dia taloha mpandehandeha matihanina noho ny ny farihy goavana besisika. Toerana hafa ahitana miavaka frantsay La Rance River sy Alder. Samy dia malaza ho toerana lehibe, hamono anao family amin'ny jono lavitra.
3. Fishing Places In Italia
Rehefa any Italia, mety koa mitady ny sasany amin'ireo tsara indrindra any Eoropa toerana fanjonoana. Ny faritra Le Marche manome lehibe sasany fanjonoana, indrindra fa ao amin'ny Cingoli, Pioraco, ary Sefro. Ry zareo sasany ny farihy tsara tarehy indrindra Italiana ny fanjonoana, misy trondro, Pike, sy ny besisika, amin'ny karazam-biby hafa. Na izany aza, raha ny farihy, misy ihany koa ny Lake Como ny avaratra, sy ny Pike sy ny akoho,.
Aoka isika tsy hanadino ny lehibe indrindra ony italiana, ny Po. Tsy poisson-chat ity tranon'ny goavana sy lehibe carps izay hitaona misy angler. In Tuscany, ny renirano no toerana mihaja indrindra mpanjono. Lima sy ny sivana lehibe ho an'ny toerana fanjonoana trondro sy ny Grayling.
Ho an'ireo anglers tia manjono ny rano malalaka, misy toerana fanjonoana lehibe roa any Italia. The Egadi Islands Sisila Ary ny fari-Sardinia dia samy finaritra anao ny hatsaran-tarehiny sy ny toetra ny jono dia manome. Mitadiava manga-vombony lamàtra sy ny espadon Dikanteny ao amin'ny Ranomasina Mediterane, ary ny metaly mamirapiratra-Jack, Tsivaravara, ary Garrick ao amin'ny Ranomasina Tyrrhenian.
4. Fishing fitoerany tany an-UK
The fanjakana Mitambatra dia mahatalanjona toerana, fanatitra mpanjono lehibe sasany ao amin'ny toerana tsara tarehy mbola tsy simban'ny bibidia ny nosy. Raha tianao ny mahagaga trondro, ny UK mety ho tsara toerana ho anao. Fa izay toerana tokony haka?
Iray amin'ireo toerana malaza indrindra ao Dartmoor, Devon. Miaraka toy izany evocative anarana, dia tsy afaka ny tsy sary an-tsaina ny zava-nitranga ny jono ho an'ny noana trondro ao amin'ny maizina renirano. Ny renirano Tyne in Northumberland manana loko izay manome anao ny tombontsoa miavaka manohitra ny ranomasina trondro velona dia. Izany no mahatonga io renirano tonga lafatra ho an'ny mazava fanjonoana sy ny trondro-dranomasina lehibe indrindra jono.
River Clettwr akaikin'ny sisin-tanin'i England sy Pays de Galles dia tsy maintsy tsara tarehy indrindra toerana Mpisantatra. Jereo intsony raha te-hiasa mafy noho ny trondro in saro rano. Ny toe-draharaha izany dia toa idirana kokoa amin'ny Strangford Lough, County Down. Io no lehibe indrindra UK ranomasina Loch nifanaretsaka amin'ny mackerel, Pollock, ary haddock, ankoatry ny zavatra hafa.
Assynt mety ho ny tena mahatalanjona toerana rehetra - maka toerana tsara eny ambany lehibe tendrombohitra, miaraka roa-dranomamy dranomasina sy ny jono safidy. Fionn Loch lehibe toerana fanjonoana trondro ho an'ny teratany volontsôkôlà.
5. Fishing Places In Alemaina
Alemaina Azo antoka fa mendrika ny toerana ao amin'ny lisitry ny toerana tsara indrindra any Eoropa mpanjono. Miaraka maro renirano lehibe ary ny farihy, dia ho zava-mahagaga eo raha tsy manao ny lisitra. Ny sasany amin'ireo toerana malaza indrindra ho an'ny nanjono tany Alemaina tsy maintsy ahitana ny Danube faritra. ao amin'ny 8 kilaometatra ela Bavaria faritra Danube, dia afaka misambotra ny be trondro isan-karazany.
Raha mila fanazavana renirano jono, ny Rhin sy ny Elbe, fitiavana indrindra amin'ny Baden-Württemberg sy Saxony-Anhalt, mifanaraka, ny zava-nitranga dia mahagaga. Na izany aza, Raha tianao farihy jono, misy foana Chiemsee farihy sy Lake Starnberg. Samy dia tena lalina, amin'ny be Pike, atendro, ary bream.
Fa ny anglers miaraka amin'ny kongonina mba handeha, misy fomba roa mitambatra ny fitiavana lehibe. Eoropa manome be dia be ny toerana hanaovana trondro lehibe sy tia ny natiora ary ny tanàna be olona na be mitovy.
Raha te-hiaina ny sasany fanjonoana lehibe, maro ireo mora idirana 5 toerana fanjonoana tsara indrindra any Eoropa mankafy. Raha vonona ianao namely ny rano, boky ny saran-dalana ankehitriny, ary aza miherika!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “5 Best Places mpanjono any Eoropa mankafy” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-best-fishing-places-europe%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#fanjonoana #traveleurope europetravel trainjourney travelgermany traveltips